Boldenone Undecylenate (Makosheni) Zvishandiso, Dutu, Dosage,
Equipoise imwe steroid inoshamisa inotengesa pasi pezita racho Boldenone Undecylenate (13103-34-9). Boldenone Undecylenate inonyanya kuzivikanwa pakati pevashandi vekudzivirira muviri nevatambi nekuda kwekukwanisa kwayo kupa hutano hwemasimba masimba uye simba. Steroid inowanikwawo pamusika pasi pemazita akasiyana-siyana emakiti akafanana naMitgan, Bolden, Equigan, Ganabol, uye Ultragain pakati pevamwe.
Kufamba munyika yevanabolic steroids kunogona kuva dambudziko kuongorora mavara akawanda anowanika pamusika. Zvose vanabolic steroids zvinogona kukubatsira kuti uwane zvido zvaunoshuva, asi zvakanaka kuti unzwisise huwandu hwezvikwata usati waita chisarudzo chako chokupedzisira. Zvose steroid inomirira kukubatsira iwe kuvaka matumbo ako pamwe nekuvandudza testosterone hormone mazinga mumuviri wako.
1.WHats Boldenone Undecylenate?
Iyi injectable mafuta-based steroid ine ine yakasiyana anabolic esters iyo inobatsira mukuwedzera hafu yehupenyu hunoita mumuviri wako. Mishonga iyi inotora testosterone hormone chaiyo, asi chikamu chakanakisisa chechi steroid isimba rekupa simba remuviri pamwe nekuita kuti kukura nekuchengetwa kwemisungo inonda. Equipoise inogadzirisawo uyerogenic zvinowanzobatanidzwa nekushandiswa kwe-steroid kana kwenguva pfupi kana kwenguva refu. Pakutanga, chirwere chacho chakagadzirirwa kushandiswa kwechiremba zvekare nekuda kwebhiza, zvichipa chikonzero chezita rean equine kurira. Zvisinei, nekufamba kwenguva mishonga inove yakakurumbira kune varwi vainge vachitsvaga kuwedzera kuti vabatsire kuchinja muviri wavo munguva pfupi nguva inogona. Kwemakore akawanda ikozvino, vatambi vechikwi nevarimi vemiti vave vachiri kushandisa kushandisa iyi mishonga yakavabatsira kuti vabudirire zvavanoda. Testosterone Cypionate: Zvose Muviri Wekufanirwa Kuziva
Tichitarisa kuEquipoise pamapepa, iwe uchaona zvakafanana neD Dianabol, asi pane imwe chete yakasiyana. Dianabol inonzi 17AA mishonga yemuromo uye ine hafu yeupenyu hwemaawa 8. Kune rumwe rutivi, Boldenone Undecylenate haina boka re17AA, asi panzvimbo pacho, rakanamatirwa kune esterecylenate ester refu. Iketani inoita kuti mishonga yemishonga isasvibiswe uye iripo seiri mafuta. Zviratidzo zvako zveropa zvechiropa zvinonyura kubva kune cheni ye ester muIquipoise, ichiisa mishonga yemishonga pasina kusangana nemuviri wako androgen receptors iripo mumasero emasisipo.
Boldenone Undecylenate inoratidzika pakati pevamwe steroid sezvo ine zvishoma nezvishoma uyerogenic zvinhu uye zvishoma zveitiro zveestrogenic uye zvinogona kutaurwa kuti ndeyevanhu vanabolic steroid. Sekugadzirisa muviri, iwe unoda kuenzanisa Equipoise nedzimwe steroid iripo pamusika. Asi, iwe haungawani neine imwechete yega, esters, uye androgenic uye estrogenic kusanganiswa seBoldenone Undecylenate. Equipoise ndeye steroid yakasiyana iyo inokupa zviitiko zvinonakidza nokukurumidza, uye ine zvishoma migumisiro yakaenzana kana uchienzaniswa nezvimwe maronda zvaunowana pamusika nhasi.
Boldenone Undecylenate (13103-34-9) ndiyo yekutanga yeva steroid inoburitswa uye inowanzonzi sekuru wemana anabolic steroid. Mushonga wacho wakatanga kuumbwa mu 1949 zvakasikwa zvakateya nheyo dzekutsvakurudza nekuvandudzwa kwevamwe vanabolic steroid. Zvimwe steroidas zvakagadzirwa zvichibva pakugadzirwa kweEquipoise. Semuenzaniso, Dianabol iyo inofanirwa equipoise yakabatana nemethyl uye yakabatana ne 17 beta hydroxyl. Chinangwa chikuru chekushandisa zvinodhaka ndechekubata mombe nemabhiza kusvika muna 1960s apo zvidzidzo zvakatanga kugadzirisa kana mushonga wacho unogona kuchengeteka kuti vanhu vashandise. Nyanzvi dzinotevera mushure mechiedza dzakaedza kusanganisa kuumbwa kwayo nevanodya zvakasiyana-siyana kuwedzera nguva yekubudiswa kwemishonga uye hafu yeupenyu zvakare.
Mune 1970s, vatsvakurudzi vakaona kuti, chirwere ichi chinogona kunge chakanaka pakubatsira vanhu kudzivirira kushaya kurasikirwa uye musisi kuparadza matambudziko. Mushonga uyu waifanira kutarisirwa nehutano wehutano maererano nezvinodiwa nemurwere. Zvisinei, mushonga wacho wakazobviswa pamusika, asi iwe unogona kuuwana mumhando dzakasiyana-siyana, mu laboratori uye unotengeswa pamusika. Parizvino, iyo chete Equipoise inowanika pamusika inongowanikwa kune zvinangwa zvechiremba. Kusvika ikozvino hapana hurumende yakabvumira mushonga wekushandisa vanhu. Zvisinei, maererano neongororo uye kuongororwa kwakaitwa, mushonga unoita basa rinokosha pakubatsira varimi vemasvingo nevatambi kuwana simba nekuvaka masimba avo.
Runoise inoshanda sei?
Kunyange zvazvo pasina nyika yakabvumira Boldenone Undecylenate kuti vanhu vashandise, vazhinji vevashandi vekugadzira muviri uye vatambi vanoramba vachishandisa iyo musimba uye simba rekuwana. Paunotora madhaji akakodzera anobva ku200-600mg kwevhiki kwevhiki ye 12, iwe uchava nechokwadi kuti uchawana mhinduro dzaunoda. Mushonga wemafuta uripo uri kunyanya kusanganiswa zvinoreva kuti huchakurumidza kusanganiswa neropa rako uye huchaendeswa nyore nyore kuburikidza neropa. Mushure mokunge mawana chirwere ichi, mushonga wezvinodhaka unobatanidza nemasero ako echisimba anokurudzira kukura pamwe nekuvandudza simba rako rose remuviri.
IEquipoise inobatsirawo muviri wako kubereka mahomoni akawanda e testosterone. Mukudzoka, iwe unofara zvakasiyana-siyana zve testosterone zvakadai sekuvandudza zvepabonde rako rekuita zvepabonde, kuvaka nekuchengetedza misungo yakaonda pakati pevamwe vakawanda. Mushonga unobatsirawo mukuvandudza kuteura ropa zvinoreva kuti mishonga yako ichawana miviri yakawanda sezvaunoshanda. Equipoise yakange iri huru mukusimudzira kupora kutsva kwemasukisi zvichiita kuti ive shamwari yevashandi vakawanda vemuviri uye vatambi. Sezvo mishonga ichi ine hafu yehupenyu hwemazuva 14, iwe unongoda kutora jira kamwechete mumavhiki maviri iro rakanaka kune vazhinji vashandisi. Dzimwe nguva unenge uchinzwa marwadzo kana kupfugama mukati mejojo ​​nzvimbo iyo inopera shure mushure mechinguva.
Boldenone inoshanda zvakanaka kwazvo nemigumisiro midiki kana iwe ukatora chirongwa chakanaka uye uchitungamira nayo nekushanda kwakakodzera pamwe nekudya kwakakodzera. Chiremba wako kana chiremba wehutano anofanira kutarisira jekisi. Uyewo, sanganisira mudzidzisi wako unyanzvi mukusarudza steroid yakarurama kuti ikubatsire kuzadzisa zvinangwa zvako. Kuongororwa kwechiremba kuchave kwakakosha kuti uone dhiyo yakakodzera iwe uyewo kuongorora kufambira mberi kwako. Usaita chikanganiso chekutenga mushonga pasina chiremba wezano rechiremba kubva iwe ungave uri kuisa muviri wako kuhutano hwehutano. Hazvina mhosva kuti iwe unogona sei kukurumidza kushandisa chirwere ichi, muviri wako wakasiyana uye unoda muyero wakatarwa.
2. Boldenone Undecylenate (Makira) Uses
Iko kushandiswa kwekushandisa kwechirwere ichi mune unyanzvi hwekuvaka muviri kunobatsira vatambi kuvaka nekuchengetedza miviri yavo yakaonda uye kupa simba rakakwana remuviri. Boldenone Undecylenate (13103-34-9) ishi ye testosterone fomu nekawedzerwa kabhiri kabatanidzwa. Iyi esterecylenate ester pane steroid ino inoita kuti iwe unakidzwe nemigumisiro kwenguva yakareba kana mazuva mashoma 14 mushure mokujowa. Nokuti vanhu vane maitiro epasi e testosterone mahomoni vanogonawo kubatsirwa kubva kune ichi chinodhaka. Kushandisa equipoise kunogona kukubatsira kubvisa erectile kusagadzikana pamwe nezvimwe zvakakosha zvinonzi testosterone. Kunyange zvazvo steroid isiri yakasimba sezvimwe imwe testosterone inowedzera, kana yakashandiswa zvakanaka inopa mhinduro inoda. The Ultimate Guide to Stanozolol (Winstrol) yeChipupuriro
Equipoise zvakare inogona kushandiswa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvakadai sekuvandudza chido chevarimi vemuviri vanoda kuwana simba rinodiwa mumuviri uye kukurudzira kugadzirwa kwe erythropoietin muinso yenyu iyo inowedzera kugadzirwa kwemasero matsvuku eropa. Hapana imwe steroid inopa simba rose remuviri uye masimba akawanda seAquipoise. Kazhinji, hauzowani chero imwe steroid inopa zvishoma nezvishoma uye zvigadzikana zvemasimba masimba uye simba rinowanikwa. Uchishandisa Boldenone, iwe uchava nechokwadi chekuwana mavara akanaka, akasimba uye akasimba.
3. Boldenone Undecylenate (Equipoise) muyero
Equipoise (13103-34-9) yakakosha pakuita kuti vatambi vabatsire, uye vadzidzisi vezvemhizha vanogona kuwana simba uye musimba hwakasimba vachivabvumira kuti vabudirire mumabasa avo. Kuti zvive nemigumisiro yakanaka, iwe unofanira kutora chirongwa chakakurudzirwa chinowanikwa kubva ku 200-600mg kwevhiki. Mushure mekuongororwa kwezvokurapa, chiremba wako achagadzira dhiyo yakanakisisa uye iwe. Ivhareji yepakati inofanira kuva yevhiki dze12 kunyange zvazvo inogona kutambanudzirwa kumavhiki e16 zvichienderana nekufambira mberi kwako. Equipoise iri kuwedzerwa kudikanwa kwevashandi uye ikozvino kuratidza kuva yakakwana Deca Durabolin kushandurwa. Izvi zvinogona kuenzaniswa nehuwandu hwekuwana simba uye hutsika huzhinji hunowanikwa; iyi steroid inopa kuvashandi. Mukuwedzera, mushonga wacho une zvishoma zvishoma nemigumisiro yakaenzana pakuenzanisa kune zvimwe zvinowedzera.
Boldenone inoshandiswawo kuti ishandiswe kuvakadzi kunyange zvazvo yakaderera doses inofanira kubva kune 25-50mgs vhiki imwe neimwe. Asi kana iwe uri mukadzi usingashandisi zvinodhaka, unofanirwa kunyatsongwarira sezvo zvichigona kutungamirira kumagumisiro akaipa. Kana ukaona chero zvikanganiso zvakakomba, bvunza chiremba wako kuti udzike muyero kana kuti urege kupera. Muvarume mavhareji emurasi anotarisa kubva ku400-600mgs / vhiki, kunyange zvazvo vamwe varume vanoshandisa kusvika ku1000mgs pavhiki, izvi zvinofanira kunge zviri pabasa rakaoma. Iwe unogona kushandisa steroid ne anti-aromatase inhibitors seArimidex kana Cytadren kuderedza midzi yemigumisiro yakasimba. Nzira yekutanga yekuchengetedza kana uchishandisa ichi chirwere ndeyekuita kuti uve nechokwadi chekutevera mirayiridzo yechiremba wako. Yeuka kuenda pamwe nekurovedza kwako nekudzidziswa kwakasimba uye kudya kwakakodzera kuti zvive nemigumisiro yakanaka. Kutungamira hupenyu hune utano inzira imwe yekuwedzera mhinduro yemishonga.
4. Equipoise hafu yeupenyu
Boldenone Undecylenate ine hutachiwana hunobudirira hwemazuva e14 hunoita kuti zvive zvakanaka kune vazhinji vanogadzira mashizha. Iyo jekiseni inogona kungotorwa kamwe chete mumavhiki maviri, asi mishonga inogona kuramba yakashanda mumuviri wako kunyange kwemwedzi uye dzimwe nguva imwe nehafu mushure mekupedzisa mhirizhonga yako. Nokudaro, zvinokurudzirwa kuti utange kutora mishonga panguva yekusiya-mwaka kuti urege kuongororwa zvakanaka. Mamwe makwikwi akadai semitambo inodzivisa kushandiswa kwesimba rekusimudzira saBoldenone. Nokudaro, taurirana vanhu vazhinji musati maita chisarudzo chekutora ichi chemishonga. Chiremba wako achakupai mukana wega wega wega kana shure kwemazuva e14 zvichienderana nekuti wakasununguka sei une majekiseni.
5. Boldenone Undecylenate (Equipoise) kufamba
Boldenone Undecylenate chirwere chakasiyana-siyana chinogona kushandiswa nokuda kwezvinangwa zvakasiyana-siyana kusanganisira kubvongodza nekucheka maitiro. Paunenge uchishandisa iyo yekucheka maitiro, mushonga unoiswa pamwe chete Winstrol uye Trenbolone, uye mukudengenyeka, equipoise inofanira kuiswa pamwe chete testosterone enanthate orcypionate uye Dianabol nemigumisiro inobatsira. Mune zviitiko zvizhinji, chiremba wako achagadzira kurongeka maererano nezvamunoda kubudirira nekuguma kwekurapa. Kuenderera mberi kunofanirwa kuendeswa nemishonga yakadai seN2Guard uye Cardarine (GW-501516) iyo inotora basa rinokosha mukukubatsira kuwana mitsva yaunotarisira. Aromatase inhibitors seArimmxx uye Aromasin inokoshawo sezvo inoderedza migumisiro yemigumisiro inobata pamuviri wako mushure mekushandisa mushonga. Maitiro acho ndeaya anotevera;
Boldenone Undecylenate kuderedza mhepo
Vhiki Equipoise Cardarine (GW-501516) Winstrol Aromasin N2Guard
1 600mgs / vhiki 20mgs / zuva 50mgs / zuva 12.5mgs / zuva 7caps / zuva
2 600mgs / vhiki 20mgs / zuva 50mgs / zuva 12.5mgs / zuva 7caps / zuva
3 600mgs / vhiki 20mgs / zuva 50mgs / zuva 12.5mgs / zuva 7caps / zuva
4 600mgs / vhiki 20mgs / zuva 50mgs / zuva 12.5mgs / zuva 7caps / zuva
5 600mgs / vhiki 20mgs / zuva 50mgs / zuva 12.5mgs / zuva 7caps / zuva
6 600mgs / vhiki 20mgs / zuva 50mgs / zuva 12.5mgs / zuva 7caps / zuva
7 600mgs / vhiki 20mgs / zuva 50mgs / zuva 12.5mgs / zuva 7caps / zuva
8 600mgs / vhiki 20mgs / zuva 50mgs / zuva 12.5mgs / zuva 7caps / zuva
9 600mgs / vhiki 20mgs / zuva Off 12.5mgs / zuva 7caps / zuva
10 600mgs / vhiki 20mgs / zuva Off 12.5mgs / zuva 7caps / zuva
11 600mgs / vhiki 20mgs / zuva Off 12.5mgs / zuva 7caps / zuva
12 600mgs / vhiki 20mgs / zuva Off 12.5mgs / zuva 7caps / zuva
Vhiki Equipoise Dianabol Testosterone Cypionate Ostarine
1 800mgs / vhiki 50mgs / zuva 600mgs / vhiki 25mgs / zuva 25mgs / zuva 7caps / zuva
2 800mgs / vhiki 50mgs / zuva 600mgs / vhiki 25mgs / zuva 25mgs / zuva 7caps / zuva
3 800mgs / vhiki 50mgs / zuva 600mgs / vhiki 25mgs / zuva 25mgs / zuva 7caps / zuva
4 800mgs / vhiki 50mgs / zuva 600mgs / vhiki 25mgs / zuva 25mgs / zuva 7caps / zuva
5 800mgs / vhiki 50mgs / zuva 600mgs / vhiki 25mgs / zuva 25mgs / zuva 7caps / zuva
6 800mgs / vhiki 50mgs / zuva 600mgs / vhiki 25mgs / zuva 25mgs / zuva 7caps / zuva
7 800mgs / vhiki 50mgs / zuva 600mgs / vhiki 25mgs / zuva 25mgs / zuva 7caps / zuva
8 800mgs / vhiki 50mgs / zuva 600mgs / vhiki 25mgs / zuva 25mgs / zuva 7caps / zuva
9 800mgs / vhiki Off 600mgs / vhiki 25mgs / zuva 25mgs / zuva 7caps / zuva
10 800mgs / vhiki Off 600mgs / vhiki 25mgs / zuva 25mgs / zuva 7caps / zuva
11 800mgs / vhiki Off 600mgs / vhiki 25mgs / zuva 25mgs / zuva 7caps / zuva
12 800mgs / vhiki Off 600mgs / vhiki 25mgs / zuva 25mgs / zuva 7caps / zuva
Iko inofanirwa equipoise purogiramu inoenda kumavhiki e12, asi dzimwe nguva inogona kuwedzerwa kusvika kumavhiki e16 zvichienderana nekuti muviri wako uri kupindura sei nemayero. Dzimwe nguva sezvakambotaurwa kare, chiremba wako anogona kugumisa kupoteredza kana iwe ukava nemigumisiro yakakomba mushure mokutora chiremba chako. Nguva dzose enda kunongororo yezvechiremba kuitira nyore kutarisa kwekufambira mberi kwako mushure mekufamba kwese. Mumwe mushandi wehutano achakubvunzawo nezvehutano hwako usati waita chirwere chinotevera.
Chirwere ichi chinogadzirwa kuburikidza nekubatanidza Undecylenate ester neBoldenone hormone structure iyo inoita kuti ive chinhu chakasvibiswa nehusi hwehusi. Iyo nhengo yehutu ndiyo inonzi Boldenone Undecylenate. Iyo mishonga muhuwandu wayo isina kunyatsofungidzirwa uye yakasvibiswa inogona kusanganiswa nezvimwe zvinokonzera zvakadai se benzyl alcohol kunobvisa chiguru chemafuta kuti zvive nyore mujekiseni inonzi intramuscularly injection. Mune ma laboratori, unogona kuwana equipoise mumhando dzakasiyana-siyana.
Chii chinonzi Boldenone Undecylenate nguva yekucherechedza?
Pamusana pemaketani akawanda ester akasungirirwa kuBoldenone Undecylenate, mishonga inogona kugara mumuviri wako kwemavhiki maviri asati atora imwe muro. Zvisinei, rinogona kuonekwa kana iwe ukawana miedzo kusvika kumwedzi ye18 mushure mokupedzisa kubvongodza kana kubvisa. Masero ester kamwechete mumuviri wako anoshandurwa kuva molecular lipid apo mamwe madiki maduku akachengeterwa mafuta ako mumuviri. Zviduku zviduku zvinodhaka zvinogona kugara mumuviri wako kwemwedzi yakati vasati vasunungurwa uye zvinyangarika zvachose. Zvichienderana nemasimba emuviri wako, unogona kuedza miedzo mishoma mashomanana mushure mokunge wapedza nguva yako, asi mune vamwe vanhu vanogona kunyange kugara kwemazana emwedzi 18 uye vachiri kuedza zvakanaka.
Kune vateereri vanoda kuda kupindira mumakwikwi emakwikwi mushure mekuzadzisa equipoise, mhepo yakanaka iri nani kutarisa chiremba wako uye kuenda kunorapwa kuongororwa kuti uzive chirwere chekuona mishonga. Chiremba wako anogona kupa mhinduro yekugumisa zvinhu zvinodhaka kubva mumuviri wako uye kukubatsira kuti uite zvinangwa zvako mubasa rako. Zvisinei, zvakanakira kubvunza chiremba wako nezvekuti ungatanga sei kushanda pakubvisa zviduku zviduku zveBoldenone pakarepo unopedza urongwa hwako. Parizvino, hapana mishonga inozivikanwa kana nzira inogona kukubatsira kubvisa zviduku zviduku zvakachengetwa mumafuta ako. Zvisinei, iwe unogona kutaura nachiremba wako zvichida h / angave ane mhinduro.
6. Boldenone Undecylenate (Equipoise) zvawanikwa
Equipoise ndechimwe chezvinhu zvakanyanya kuvimbwa nesteroid nevatambi vezvidzidzo uye vadzidzisi vemuviri nekuda kwemagumisiro anonakidza anopa. Zvisinei, chokwadi chinoshamisa kwazvo pamusoro pezvinodhaka izvi ndezvokuti hazvina kumbogadzirwa kuti vanhu vashandiswe. Kunyange zvakadaro, mushonga uyu wakava steroid shure kwekubudirira kwevatambi vakawanda uye bodybuilders. Zvigumisiro zve equipoise hazvisi sezvinoshamisa sezvinoitwa Dianabol kana testosterone. Kushandisa chiremba, iwe unofara maitiro maviri akanaka, uye nenguva iyo iwe uchanzwa nemigumisiro.
Boldenone Undecylenate kushandiswa kune zvipo zvakasiyana nemigumisiro yakanaka mumuviri wako izvo zvinotevera;
Kuvandudza simba rose remuviri
Kwemakore mazhinji ikozvino kubva paakaonekwa kuti equipoise inogona kubatsira vatambi uye vadzidzisi vezvemuviri, yakaratidza kuti inopa simba guru remuviri. Izvozvo zvinorema sezvinoita vashandi vekugadzira mushure mekushandisa mushonga vanowana simba rakakwana kuti vasimudze zviremba zvakanyanya zvakanyanya uye mamwe mabasa. Vatambi vanowanawo simba rekushanda kwemaawa akawanda sezvavanoita uye kunyange panguva yemakwikwi. Mune zviitiko zvizhinji, vatambi uye vanogadzira muviri vanoneta nokukurumidza pavanodzidziswa uye dzimwe nguva pavanopinda mumakwikwi akasiyana-siyana anovaramba mukana wokukunda. Zvisinei, neBoldenone, unogona kuva nechokwadi kuti uwane simba remuviri iro richakubatsira kana uchishanda pamwe chete mumakwikwi emakwikwi.
Kuonda kwemisimba kunowanikwa
Chimwe chezvikonzero zvikonzero nei vashandi vezvigadzirwa zvemuviri nevatambi vanoshandisa equipoise iyo inokwanisa kukwidza kuonda kwemasumbu. Kwose 100% yevanhu vanoshandisa ichi chiremba zvakarurama uye vanoenda nayo nevanoshanda zvakanaka uye kudya, vanozovandudza masimba ekukura uye musumbu. Sekugadzirisa muviri, misumbu yako ine basa rinokosha mukusimudzira kushanda kwako. Kuwanda kwevanhu vanobudirira mumuviri wamunoona kumativi ose nekunakidza hukuru hwemuviri nemasumbu, vangave vachishandisa kana kushandisa Mashoise pane imwe nguva muupenyu hwavo. Tsvaga chiremba wako uye mumurege azive zvaunoda kuzadzisa pakuguma kwepurogiramu kuitira kuti iye / iye agadzirire zvakanakisisa uye kuenzanisa kwako.
Inopa yakakosha, yakachena uye inojekesa mushutu tone
Kana iwe waifunga kuti steroid iyi ingangokubatsira kuti uwane mishonga, saka unogona kunge usina kururama. Pamusoro pekubatsira mishonga yako kukura, steroid inovandudza uhu uye inokubatsira kuti uchenese uye unotsanangurwa mutsara. Mishonga yako inoda kuva yakasimba, yakaoma uye yakakutsvaka iwe kuti uite zvinangwa zvako semuongorori wemuiti. Kune rumwe rutivi, iwe unodawo kuva nemisimba kukura, uye ndizvo chaizvo izvo zvinogadzirisa zvinopa kuvashandisi. Chakavanzika chekuwana tsvina iyi ndeyekutevera mirayiridzo yechiremba wako uye kusanganisira mudzidzisi wako uyewo unyanzvi wako wezvokudya mumutambo wose.
Inobatsira kupisa muviri wakasindimara mafuta
Vanhu vazhinji havasi vatambi chete uye vashandi vekugadzira muviri vanoedza kurambidza mafuta akawandisa emafuta. Boldenone Undecylenate ine steroid yakanakisisa iyo inobatsira mukupisa mafuta asina kudiwa emuviri uye kukubatsira kuti uwane chimiro chemuviri unoda. Maererano nemishonga yakawandisa mafuta emafuta ane ngozi kune utano hwako uye inogona kutungamirira kune zvirwere zvisingaperi sekushaya chirwere chemwoyo. Vashandi vanogadzirisa nguva dzose vanofara nemashandisirwo emishonga iyo yakavabatsira kupisa mafuta emimba, zvichiita kuti vakwanise kutungamirira hupenyu hwakanaka. Kune vanovaka muviri, mishonga inopa simba yekushanda kunze uye kupisa mafuta asina kugoverwa ayo anozopedzisira aita kuti awane kutaridzika kwemuviri kutaridzika uye kumira. Sustanon 250 Mashandisiro, Nhanho, Nhamba, Zvipo, Mazano
Kuvandudza kuteura ropa
Equipoise inokurudzirai mafungiro ako kuti abudise zvimwe erythropoietin iyo inokonzera kugadzirwa kwemasero matsvuku eropa. Panguva imwecheteyo, mishonga inovandudza ropa riri mumuviri wako zvinoreva kuti mishonga yako ichafarira kuenderera mberi kwezvibereko. Uyezve, mishonga yako ichapora nokukurumidza mushure mokutambanudzwa paunoshanda kunze. Kugovera kwakakwana kwezvimiti kunobatsirawo kuti mishonga ikure zvakanaka, uye pamagumo emhepo, iwe uchakwanisa kuwana hutano hwakanaka uye hunoonda. Kuwedzera kwekuyerera kweropa kunobatsira varume vari kurwisana ne-erectile dysfunction, vanovandudza zvepabonde yavo yega yega.
Pasinei nokuti uri chigadzirwa chikuru pane dzimwe nguva equipoise inogona kupa migumisiro yakaipa, kana iwe usingashandisi dhiji yakakodzera, kana kuti inofamba nemuviri wako. Mumuviri wako unogona kuita zvakasiyana pane zvaunotarisira uye unopedzisira uchiyamwisa madhara. Ndosaka zvakakurudzirwa kuzivisa chiremba wako usati watenga mishonga kuti uite chirongwa chekurapa chinokubatsira kuderedza kana kudzivisa zvinetso zvakanyanya.
7. Boldenone Undecylenate madhara
Chinenge chinhu chose, kwete kunyange equipoise inouya nemigumisiro yakasiyana-siyana iyo vamwe vanodzivirirwa, uye vamwe havasi. Zvisinei, pane zvinodhaka zvamungashandisa panguva yekutenderera kwenyu kudzivirira kana kuderedza kushanda kweMigumisiro yeEquipoise. Heano maitiro akawandisa anowanzosangana nawo paunoshandisa iyi steroid inoshamisa;
Equipoise ine zvirwere zvakadai zvakafanana nedzimwe steroid kunyange zvazvo iwe ukashandisa zvinodhaka zvakanaka, zvinokonzera hazvizove zvakanyanya. Zvisinei, kushungurudzwa kweBoldenone kunogona kutungamirira kuhutano hwehutano hunogona kukubhadhara mari yakawanda uye nguva yekudzosa migumisiro. Izvozvo zvinowanzoitika zvinosanganisira;
Unnatural hair kukura
Kusuruvara kwemawere kusina kujairika
Kuwedzera kwepenisheni yevarume uye clitoris muvakadzi
Zvisinei, kune zvimwe zvinokonzerwa nemigumisiro yaunogona kutora mushure mekutora madhaji ako akadai sokurutsa ropa, kuora mwoyo, kurwadziwa kwepfupa, kuwedzera kwemahombekombe, kubuda ropa kudarika, rurimi rukuru, ruvara-ruvara rwemuvara, chiedza / chivara chine mutsvuku uye kuvhara makumbo kana maziso ako pasi. Kana ukaona chimwe chezviitiko izvi mushure mokutora mishonga, taura nachiremba wako pakarepo kubva kuwedzerwa kana chirongwa chinofanira kumira nokukurumidza sezvazvinogona. Migumisiro yakajairika kune avo vanopfuura kudarika kana kushandisa zvisina kunaka mushonga, uye kana musingachenjeri, migumisiro inogona kuva nekuguma kwemuviri wenyu.
Iko inonyanya kukosha yechipfuva yechirungu inokonzera mhete pamapfudzi ako, kumashure, uye pachipfuva. Zvisinei, mashoko akanaka ndeokuti iwe unogona kudzora masheya kuburikidza nekushandiswa kwe-anti-acne sese, lotion kana anti-bacterial zuva nezuva kusvikira wapedza nguva yako. Boldenone inozivikanwawo nekuwedzera chido chekudya izvo zvingave zvisingabatsiri kune avo vanoshandisa mishonga yekucheka. Kuwanda kwevashandi vezvinodhaka kunotsutsumwa pamusoro pekuzara nenzara uye zvishuvo zvisingawanzo zvekudya. Saka, kana uri kufunga nezvechirwere ichi, tanga nemadhora maduku zvakanyanya kuitira kuti chinangwa chako kubvisa mafuta akawandisa kana iwe unoda kuderedza muviri. Paunoona kuwedzera kwechido chako, udza chiremba wako kuti aderedze kuyerwa kana kuwana imwe nzira yekugadzirisa.
8. Ndiani asingafaniri kushandisa Boldenone Undecylenate?
Kazhinji equipoise inogona kuva nemigumisiro yakawanda kana inoshandiswa nevanhu vasina kukurudzirwa kuti vashandise kana kana kupfuura. Vana, vakadzi vari kutarisira kuva nepamuviri kana avo vane pamuviri, uye amai vanoyamwisa havafaniri kushandisa equipoise. Uyezve, vanhu vari pasi pemishonga kune zvakasiyana-siyana zvakanyanya zvirwere zvakadai sekuropa kweropa, kuora kwechiropa, yenzei, kenza ye testicular, kenza yeprostate kana kenza yemvere inorayirwa kuti isatora steroid iyi.
Dzimwe nguva ungasave nematambudziko anotaurwa pamusoro apa, asi mushure mekushandisa steroid, unosangana nemigumisiro yakaoma. Izvi zvinowanzoitika sezvo miviri yevanhu yakaoma uye muviri wako unogona kuita zvakasiyana pane zvaunotarisira. Iwe chete unoda kuzivisa chiremba wako pakarepo paunotarisisa kuitika kuitira kuti iwe ugone kuwana mushonga nokukurumidza. Kukundikana kutsvaga kurapwa kwenguva nenguva kunogona kutungamirira kuhutano hwehutano, uye zvimwe zviitiko zvingasazogadziriswa.
Kune rumwe rutivi, vanhu vane matambudziko emapfupa kana zvirwere zvemoyo vanofanirawo kugara kure neBoldenone. Kazhinji, kuongororwa kwezvokurapa kuchave kwakakosha kuti uone kana iwe ungave uine hutano hwehutano hunokutadza iwe kubva kushandisa steroid. Boldenone inogara kwenguva yakareba mumutumbi wako sezvo kubva mumaketani akareba esiteri mumishonga yakanyanyisa kusanganiswa, inochengetwa mumafuta ako uye inogara imomo kwegore.
Nokudaro, kana iwe uri mutambi mumitambo ine mishonga-inoongororwa, zvichava kuchenjera kudzivisa kushandisa steroid iyi. Iwe unogona kuedza zvakanaka, uye izvozvo zvinogona kuparidzira dambudziko kumabasa ako. Sezvakambotaurwa kare chirwere chacho hachibvumirwe zviri pamutemo chero kupi zvako munyika kuti vanhu vashandiswe, uye sezvo sangano rinorwisa-doping rave richirwisana nekushandiswa kwe steroids nevatambi, iwe uchava wakachengeteka kana iwe uchifunga imwe sterid steroid shoma.
9. Boldenone Undecylenate (Masangano) ekucheka / kubata
Equipoise ndechimwe chezvishoma zvinoshandiswa steroid zviripo pamusika nhasi. Iko inoshanda kana yakashandiswa zvose zvinokonzera kubvisa nekucheka. Zvisinei, pawakashandiswa iwe pachako Boldenone haigoni kupa zvigumisiro zvinoshamisa sezvaungatarisira. Nokudaro, paunenge uchishandisa kuita zvinangwa, inofanira kushandiswa mumutsara wepamusoro uye zvigumisiro zvehutano. Saka, equipoise ndeyekuwedzera kwakanakisisa kuwandu yako yekubata. Nenguva iyo iwe unopedza Boldenone yako bulking cycle, iwe uchawana zvikomborero zvakadai zvakasimba uye musimba zvakaoma.
Ichi ndicho chimiro chakanakisisa chekushandisa nekuda kwekucheka kunyange kana iwe uchizvitora woga; iyo mishonga inobatsira mukusimudzira nekuchengetedza mishonga inowanikwa, kuvandudza hutambudzi pamwe chete netsanangudzo. Zvisinei, chinetso kuburikidza nekushandisa equipoise pakucheka kwekucheka ndechokuti inokurudzira chido icho hachibatsiri avo vari pasi pegoriki yakasimba inodzorwa kudya. Kana ukaona kuwedzera kwekudya kwako mushure mekushandisa steroid iyi, zivisa chiremba wako kuti aderedze kuyerwa. Kupisa mafuta akawandisa mumuviri kunogona kuva kwakaoma kana uchiramba uchinge usina kudya tsika dzingaguma nekushandisa equipoise.
Muzvose Boldenone Undecylenate bulking uye kudzvora, kodzero yakakodzera inokosha kana uchida kuzadzisa zvinangwa zvako. Zvinokurudzirwawo kuti uone kufambidzana nehutenderedzwa nekushanda kwakakodzera nekudya kwakakodzera kuti iwe uwane zvigumisiro zvepamusoro. Vanhu vazhinji vave vachishandisa steroid nokuda kwekudzivirira kana kucheka kunopa chibereko chakanaka mhinduro uye huwandu hwakanaka - chinoratidza kuti inhu uye chigadzirwa chinopa migumisiro inoshamisa kune vashandi vanovimba nayo. Muzviitiko zvose izvi, kurapwa kwechiremba kuchave kwakanaka kuti uwane chirongwa chakanaka uyewo kukubatsira kuziva kana iwe unokodzera kushandisa steroid kana kwete. Kutenga chigadzirwa chiri paIndaneti kana kubva kuzvitoro zveSteroid zvinogona kuva nengozi kana usingabvunzi chiremba wako. Nguva dzose yeuka kuti miviri yevanhu inoita zvakasiyana nezvimwe zvinhu zvakasiyana kwete steroid chete. Vamwe vanachiremba havanawo kuziva kuti steroids inoshanda sei; mudzidzisi wako achava munzvimbo yakanakisisa yekukubatsira kuwana utano hwakanaka. Usaenda kune chero chiremba chero upi zvake kumativi ose kuti ubatsirwe, tsvaga iyo iyo yave ichibatsira vashandi vekugadzira muviri uye vatambi vanozadzisa zvinangwa zvavo. Chiitiko chinokosha apo uchitsvaga chiremba akakurudzira kukubatsira kuti uwane equipoise kukwirira uye kuenzanisa.
10. Boldenone Undecylenate (Equipoise) inobatsira
Chinokonzera kugadzirira steroid yakakurumbira ndiyo inobatsira kune vashandisi vayo kune avo vanoitora iyo kubvisa uye avo vanoisarudza iyo yekucheka. Kwemakumi emakore ikozvino mushonga wakaratidza kuva chikamu chinokosha chevashandi vakawanda uye vatambi pamwe chete. Kunyange zvazvo mamwe emhando ye equipoise yakafanana neyedzimwe steroid, ichiri chidimbu chinodiwa pakati pevashandi vekuvaka muviri. Chirwere ichi chinokuchengetedza iwe zvishoma nezvishoma asi zvisingagadziriswi sezvo ine tsvina yakachena mumuviri wako. Saka, kana yakashandiswa zvakanaka, hauzowanzova nemigumisiro yakakomba. Zvipo zvakanakisisa zvaunofara paunenge uchishandisa equipoise zvinotevera;
Kubudirira kwevarume maitiro
Kunyange zvazvo kubatsirwa uku kunogona kufungidzirwa sekusagadzikana kunyanya kuvakadzi, kune varume zviri chaizvoizvo chikamu chikuru. Munhu wese anonzwa akanaka kana achigona kuonekwa kuburikidza nehukama hunhu hwakadai sekuve nenzwi rakadzama, mvere ine mvere, ndebvu, kunyange misi miviri yakasimba, uye muviri wakafanana. Paunosanganisa kushanda mukati mako nekudya kwakakodzera, iwe uchava nechokwadi kuti unakidzwa nemigumisiro inoshamisa. Testosterone yakaderera mumuviri inogona kuva chikonzero chekushaikwa kwehukama hwemurume mauri. Zvisinei, equipoise inogona kubatsira zvikuru kune varume vanofunga kuti vasati vava kukudziridza hukama hwevarume zvizere. Chero ani zvake anoshaiwa kusimba masimba ane simba anogona kushandisa chigadzirwa ichi, asi vakadzi vanofanira kufunga nezvekushandisa masero maduku kuti vasaparadzise varume.
Batsira mukucheka mafuta akawanda
Kuti iwe uwane kana kuita kuti mishonga yako ioneke, unofanira kubvisa mafuta akawandisa mumuviri wako. Wati wakambozvibvunza here kuti nei vadzidzisi vane miviri yakasimba uye yakasimba pamwe nechose chinoputika gumbo? Izvozvo zvinokonzera kushandisa steroid kutendeseka se equipoise. Mishonga inopisa mafuta ose asina kugoverwa mumuviri wako uye inoita kuti mishonga yako ikure pasina kupindira kwemafuta aripo. Vanhu vazhinji vane musuru, asi haisi kuonekwa nekuda kwemafuta anochengetwa pasi peganda. Yenguva yekufunga kutora equipoise kana iwe uchinzwa sokuti hausi kuwana kana kutora misungo yakaoma kunyange mushure mekushandisa imwe steroids iripo.
Stimulate masero matsvuku eropa
Ropa Rako rinotora chikamu chinokosha mumuviri wako mukugovera matukisi akasiyana-siyana ane michina yavanoda kuita mabasa avo zvakanaka. Equipoise inokurudzira itsvo yako kuti ibudise yakawanda ye erythropoietin iyo inokonzerwa nekugadzirwa kwemasero matsvuku eropa mumuviri wako. Kuva neropa rakakwana inzira imwe yekutungamirira hupenyu hwakanaka kubva pane imwe nhengo yemuviri wako kugamuchira michina yakakwana. Kune vanoumba muviri nevatambi, nguva dzose kuteura ropa kunokosha kuitira kuti mishonga dzigadzirise ivo nokukurumidza nekukura panguva imwecheteyo. Paunenge uchishanda kunze, iwe uchange uri kutambanudza mishonga yako, saka saka inoda michero yekurapa nekugadzirisa ivo nokukurumidza.
Inobatsira vanhu vanotambura nemasumbu kuparara zvirwere uye osteoporosis
Equipoise inogona kubatsira kune varwere vanorwara nezvirwere zvinokonzera kuora muviri uye musimba kuparara. Iyo mishonga inosimudzira protein synthesis, nokudaro inovandudza musimba wako kukura pamwe nekuvandudza hupenyu huno hwemuviri wako. Osteoporosis chirwere chinoita kuti mapfupa ako ave asina simba anokonzera kuhutano husina simba. Kubva Boldenone Undecylenate inokurudzira simba rako mumuviri, inokubatsira kurwisa Osteoporosis. Kune rumwe rutivi, kana uri kurwara nezvirwere zvinokonzera kukura kwekuremera kukuru, kushandisa equipoise kunogona kukubatsira kuti uwanezve muviri wako mashoma.
Nhamba dzenguva dzenguva dzinonzwisisika
Kusiyana nedzimwe steroid iyo inoda kuti iwe uwedzere madhavha anenge uine zuva rega rega, iwe unongoda kutora Equipoise dose kamwe muvhiki mbiri. Nokudaro, iwe uchange uchinetseka kuwana jekiseni sezvo ichikupa nguva yezvikamu zvejojo ​​kuporesa usati watora muzana unotevera. Anenge mumiriri wega wega anogutsikana nemazuva e equipoise uye zvichida ndicho chikonzero chekuzivikanwa kwaro kuisa mararamiro ayo anopa mushure mokuzadzisa purogiramu yako. Kunyangwe iwe ungasangana nekutsamwa kana kuzviputira kunharaunda yejojo, inongova nguva pfupi uye inopera mukati memazuva maviri mushure mekutungamirirwa kwemurairo.
Pane zvakawanda zvinobatsira zvauchazonakidzwa nekushandisa equipoise izvo zvisingasviki kune vavanemi uye mizimba. Saka, usafungidzira kuti mishonga inogona kungoshandiswa chete nevadzidzisi venyama chete. Kana iwe uchida kutema mafuta uye kuvaka masimba ako pamwe nekuwana muviri unofadza tarisa iwe unogona kutarisana nechiremba wako pamusoro pemishonga. Dzimwe nguva chiremba wako anokwanisa kupa steroid iwe iwe mushure mokucherechedza mamiriro ako ezvinhu anogona kurapwa ne equipoise. Kana iwe uchinzwa usina kunakidzwa nemajojo, zivisa chiremba wako kuti akubatsire kuwana imwe nzira inoshandiswa.
11. Boldenone Undecylenate (Equipoise) mhinduro
Kuenzanisa kuongororwa kwe equipoise pamapuraneti akasiyana-siyana paIndaneti, unogona kutaurira kuti vazhinji vashandisi vanofadzwa nemigumisiro iyo inopa kana yakashandiswa zvakakodzera. Kuwanda kwevatambi vemasikirwo akadai sevashandi vekudzivirira uye vanoita bhodhi vanogona kupa zvavakaita kuBoldenone Undecylenate. Mushonga wacho wakabatsirawo mukubatsira vanhu vakawanda vasiri mumutambo wenyika semafungiro ekurasikirwa kwekurema uye musimba kuparadza zvirwere. Vakadzi vavewo vanobatsirwa nemudzvinyiriri uyu asi ivo vanorayirwa kuti vatore madhoji maduku kuti vawane mhinduro yakawanda.
Zvisinei, vamwe vashandisi havana kumbova nenguva yakaoma nemishonga mushure mekunge miviri yavo yaita nenzira yakasiyana nemishonga kupfuura iyo yaitarisira. Mamiriro evanhu evanhu akaoma, uye dzimwe nguva unofunga kuti sezvo chigadzirwa chiri kushanda zvakanaka neshamwari yako, chichavawo chairo newe. Ndiyo kukanganisa vanhu vazhinji vanoita uye vanoguma vachiva nemigumisiro yakakomba panzvimbo yekufadzwa nezvipo zve equipoise. Apo iwe unotenga steroid uye ukashandisa kunze kwezano rechiremba wako, iwe zvechokwadi uchasangana nematambudziko. Zvakaoma kuwana dhiyo rakakodzera kwete kuenda kuchiremba.
Kuwanda kwemhinduro dzisina kunaka vanhu vanopa mishonga iyi inokonzera kudarika kana kuishandisa zvisina kunaka. Dzimwe nguva vanhu vangave vari kutambura nezvirwere zvisingaperi zvisingaiti chirwere cheshuga kana chirwere chemwoyo pane vamwe umo varwere havabvumirwi kutora mishonga. Kuona chiremba wako kunofanira kuva yakakosha iwe usati wafunga nezvokutenga equipoise kana iwe uchida kudzivisa matambudziko akaipa. Sezvakambotaurwa kare, vakadzi vane pamuviri kana avo vanotarisira kuva nepamuviri munguva pfupi vanofanirwawo kugara kure nemishonga iyi.
Kunyange zvakadaro, avo vari kutora mishonga pasi pekuongororwa kwachiremba vari kupa Boldenone mhinduro dzakanaka pamwe nekuongororwa kwakanakisisa. Kuvaka mishonga yako kana kutema mafuta akawandisa mumuviri wako ndechimwe chezvizhinji zvinobatsira vashandi vanonakidzwa mushure mekunge vapedzisa chirwere chekurapa. Iyo equipoise inoshandawo mukupa zvakasimba, zvakasimba uye zvinoshamisa zvisungo zvakakosha mumagadzirirwo emuviri nevatambi. Iwe unogonawo kuwanikwa nemigumisiro yakafanana pamwe nekuvandudzwa kwekuyerera kweropa uye unonakidzwa nekugadzirwa kwevarume zvakadai sekudzika kwezwi, kukura kwembebvu pakati pevamwe.
Muchidimbu, sekufanana nemimwe michina equipoise yave ichiwana chiyero chakaenzana chezviitiko zvakanaka uye zvisina kunaka zvichienderana nezvakashanda sei kune vanhu vakasiyana-siyana. Hapana chigadzirwa chinonzi 100% chinoshanda kunyanya mishonga. Vamwe vanhu vanogunun'una pamusoro pokuputika nekutsamwa kunopoteredza nzvimbo dzejojo ​​apo vamwe vanonyunyuta nezvemigumisiro yakaipa sekubuda ropa kana kurutsa. Kazhinji, kune vadziviriri nevatambi, mishonga iyi yakabudirira zvikuru uye vazhinji vavo vanofara nemishonga uye chaizvoizvo, ivo vari mumutambo wavo wakanyanyisa kana wakaoma. Kana zviitiko zvepamberi mushure mekutora chirwere chako, zvichave zvakakosha kuzivisa chiremba wako pakarepo kuti usadzivisa mamwe matambudziko. Dzimwe nguva zvinenge zvichidikanwa kuderedza kuyerwa kana kuregerera mhirizhonga kana mamiriro ezvinhu ari kuwedzera sezvo zvichigona kutungamirira kuhutano hwehutano.
12. Boldenone Undecylenate (Masangano) ekutengesa
Various online steroid vendors stock equipoise, uye iwe unogona kuzvitenga kubva kwavari. Zvisinei, ona kuti mutemo unorevei munharaunda yako sezvo mushonga wacho usina kubvumirwa chero kupi zvako kwevanhu. Semuenzaniso, muUnited States of America, Boldenone Undecylenate yakarongerwa seChechi Chetatu, yakarongedzwa mutengo unoreva, kana iwe ukabatwa ne steroid iwe unogona kutongerwa neefony kana iwe usina chirongwa chechiremba chinoshanda. Kudzioise kutengesa, kutenga, uye kutengeswa kuUnited States of America kunoonekwa sechivi chemhosva, uye iwe ungazviwana uri kumashure.
Saka ita nechokwadi kuti iwe unotevera nzira dzakarurama dzakapiwa nemutemo usati watenga steroid iyi, uye nzira yakachengeteka ndeyokubatanidza chiremba wako muhutano hwose. Mudzidzisi wako anofanirwawo kunge achiziva mitemo inotungamirira kutenga nekushandiswa kwe steroid iyi. Dzimwe nyika dzakadai seUnited Kingdom hadzina mitemo yekuongorora kushandiswa kwe equipoise. Saka, iwe wakasununguka kutenga, kutumira kana kushandisa steroid kana ukagara muUnited Kingdom. Canada inoshandawo seUnited Kingdom, zvisinei, kana iwe uri kubatwa kutengesa steroid iwe uchazviwana uri munharaunda isina kururama yemutemo, uye iwe unogona kutongerwa kwemakore akawanda pamwe nekukamanikidzwa kubhadhara mari yakawanda.
Kunyange zvakadaro, sezvo equipoise chirwere chinozivikanwa chinoita kuti zvive zvakaoma sezvamungafunga kunyange kana iwe ukagara muUnited States of America uko pane mitemo yakasimba. Iwe uchadaro, saka, unofanirwa kutsvaga Laboratories pasi pevhu ((UGL) iwe kuti uwane mishonga. Zvimwewo, tsvaga equipoise pamusika mutema. Zvisinei, iwe unofungisisa kuti usapinda zvikwata zvepamutemo zvinogona kukutumira kumashure. Kurwisana kwekutsvaga steroid inokosha inofanirwa kuongorora zvikomborero zvauchazonakidzwa mushure mokupedzisa kucheka kwako kana kubvongodza. Kune vashandi vekugadzira muviri, unofanira kufungisisa kutsvaga chirwere ichi kana uchida kusvika nekuchengetedza mishonga yakakosha pamwe nekukubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako.
Munyika umo mitemo inobvumira kushandisa steroid se equipoise, zvino kuwana mishonga hakufaniri kuva dambudziko sezvo pane zviuru zvevatengesi veSteroid online apo iwe unogona kuzvitenga. Basa rako richava kungotarisa mutengesi akatendeseka uye anorumbidzwa kuitira kuti iwe uve nechokwadi chokuti uri kushandisa kana kutenga steroid yakarurama. Unhu hwechirwere hunokosha kana uchida kuwana mhinduro yakarurama. Mudzidzisi wako kana chiremba anogona kukubatsira kuwana mutengesi akakodzera uye kupi Tenga Boldenone Undecylenate online.
13. Iwe ungazive sei kodzero yakanaka yekugadzirisa mutengesi wepaIndaneti?
Hapana mubvunzo kuti kuziva kuti Boldenone Undecylenate muchengeti wekutsvaga paIndaneti yakanaka kunogona kunge yakaoma nekuda kwekuwanika kwevazhinji vatengesi veSteroid online. Mutengesi mumwe nomumwe anotaura kuti ndiye anonyanya kuita kuti zvive zvakaoma kuzive yakanakisisa zvikuru kana iwe uri mutsva weSteroid user. Iwe unofanirwa kunge uchifara kubva kubva kune vazhinji Boldenone Undecylenate vatengesi; iwe unogona kukurumidza kuziva chakanakisisa. Pane zvinhu zvakasiyana-siyana zvaunofunga kuti zvichakubatsira kuziva steroid yakakodzera mutengesi, uye ndeaya anotevera;
Bvunza chiremba wako kana mudzidzisi
Nzira yakanakisisa yekuwana mukana wekugadzirisa vatengesi zvakanaka paIndaneti kana pamusika mutema ndeyokutumira. Kana iwe uchidzidzisa nevamwe vadzidzisi vezvemhizha, vabvunze kwavanogara vachitenga equipoise. Zvichida, chiremba wako uye mudzidzisi anogonawo kuva anobatsira zvikuru kana iwe usingazivi kuti unogona kutenga ipi yepamusoro equipoise. Chiremba wako anogona kunge ari munzvimbo yakanakisisa yekubatsira sezvo iye / ane chikwata chekuita uye anogona kuwana steroid nyore nyore.
Nzira yakanakisisa yekutsvakurudza ndeyokutarisa kuongororwa kwevatengi pane webusaiti ye steroid webhusaiti. Kazhinji munhu anofara mutengi acharamba achida kugovera mufaro, uye avo vakaora mwoyo havazomboni kutaura manzwiro avo. Kuverenga zviongorori zvevatengesi vakasiyana-siyana 'masayiti, iwe uchava munzvimbo yakanakisisa yekuziva mutengesi akanaka kuvimba, usati waita chisarudzo chako chokupedzisira. Usagara uchivimba nezvipupuriro zvaunowona pane dzimwe nzvimbo dzevashambadzi vewebhu sezvo vachiitwa kuti vadeke vatengi kutenga zvigadzirwa zvavo.
Steroid yakanaka mutengesi achagara ane mukurumbira wakanaka pamberi pevatengi. Kunyangwe iwe uchitsvaga kushandisa shanduro yako yaunofarira, iwe uchawana nyore runyorwa rwe e trustoise wakatendwa nevamwe vatengesi steroid. Kunyange zvazvo vamwe vatengesi vatsva pamusika, chenjererai paunotenga steroid kubva kwavari. Vazhinji vachakukwezva nemitengo yakakosha asi edzai kuti chiremba wako anokubatsira kuwana mishonga yakarurama kubva kumutengesi waunosarudza. Iwe unogona zvakare kutarisa Boldenone Undecylenate uye unorumbidzwa uye anoronga steroid zvakananga.
Iyo yakanakisisa equipoise muvatengesi kuvimba ndiyo iyo yave iri mubhizimisi kwemakore mazhinji. Yeuka steroids yakafanana nemamwe madhiragi. Nokudaro mutengesi akakodzera anofanira kuva nokunzwisisa kwakanaka kwe steroid yakasiyana uye kuti ingashandiswa sei. Chiitiko chinoita kuti zvive nyore iwe uye kunyange chiremba wako kuvimba mutengesi. Rega mutengesi akuudze kana kuti aratidze vamwe vevatambi vanobudirira kana varwere vanga vari kutenga equipoise kubva pawebsite kana pasi re laboratory. Usakurumidza kana kutorwa nemutengo. Kana iwe usingazivi kuti ungawana kupi steroid, rega chiremba wako atenge icho kwauri.
14. Boldenone Undecylenate (Masangano) ekugadzira muviri (muchidimbu)
Equipoise yave iri steroid yakakurumbira mukusimudzira simba remuviri, masimba mashoma, uye utsinye. Mushure mokunge mishonga yawanikwa kuti inogona kubatsira vatambi uye vashandi vezvikwata, Equipoise zvave zvichishamisa kunyange nekuda kwekurapa. Kusiyana nedzimwe steroids, equipoise haibvumiri kuchengetedza mvura yakawanda mumuviri wako kana mutsvuku mukati uye kunyange pashure pokupedzisa kufamba kwako. Kurongeka kwezvinodhaka kunyange kana yakagadzirirwa mabhiza, inopa migumisiro yakaisvonaka mumitumbi yevanhu. Iyo mishonga inokurudzira kubudiswa kwemasero matsvuku eropa mumuviri wako pamwe nekuvandudza kuteuka kweropa izvo zvinoita kuti mishonga yako yemisumbu inakidzwe nehupenyu hunogara huripo. Paunenge uchivhima, masimba ako akatambanudzwa uye anogona kunetseka dzimwe nguva. Zvisinei, ne equipoise, kuwedzerwa kwekuyerera kweropa uye mishonga inogadzikana kunopa zvichaita kuti mishonga yako ipore nokukurumidza.
Boldenone Undecylenate nokuda kwekuvaka muviri kunovandudza chido chako uye yakarongedzwa zvakanakisisa seimwe yepamusoro-soro yekubvisa steroid. Kuti mishonga yako ikure zvakanyanya sezvaunenge uine equipoise bulking cycle, unofanirawo kuva nechokwadi kuti uri kutora kudya kwakakodzera uye kushanda zvakanaka kuti unakidzwe zvakakwana. Kune vadziviri vemumuviri vari kutambura kubvisa mafuta akawandisa ari kuvhiringidza kuonekwa kwemasumbu enyu, zvino unofanira kutanga kushandisa equipoise. Iyo mishonga inonyatsoratidza rekupa nekuchengetedza zvakashata, zvakasimba uye misimba yakasimba yevashandi vezvemapurisa nevatambi.
Chikamu chakanakisisa chei equipoise yekuvaka muviri ndeyokuti kana iwe uchiitora nenzira yakarurama uye unoteerera kune mirayiridzo inopiwa nemuiti uye chiremba iwe unogona kuva nechokwadi chekuzadzisa zvinangwa zvako. Iyo mishonga inovandudza simba rako rose remuviri iro richakubatsira iwe kudzidzisa kwemaawa akawanda uyewo uri nani mumabasa ako emitambo. Ikozvino, equipoise inoramba iri steroid yakakwirira iyo kubva musimba wemaviri uye simba rose remuviri iro rinopa rinogona kuenzaniswa nezvimwewo steroid inopa kuvashandisi. Zvisinei, equipoise inogona kuva nemigumisiro yakakomba kana ukasashandisa zvisina kunaka kana kuidarika. Kana iwe uri mutsva muSteroids, zvinokurudzirwa kutanga kutanga kuderedza dhizinesi zvingawedzerwa mushure mokunge muviri wako uchishandiswa kuBoldenone Undecylenate.
Nhengo yakakodzera yevashandi vemuviri vanobva ku200-600mg kwevhiki uye kutenderera kwevhiki dze 8-12 dzinogona kutambanudzwa zvichienderana nekuita kunoita muviri wako kune steroid. Kudzioise hafu yehupenyu inofadza zvikuru, uye iwe unongoda kutora jekiseni yako kanenge kamwe chete mumavhiki maviri. Boldenone inoramba ichigara mumuviri wako kwemazuva 14 usati watora dhiyo inotevera. Zvisinei, mushure mokupedzisa kubvongodza kana kukwegura, zvikamu zvezvinodhaka zvicharamba zviripo mumuviri wako kwenguva refu. Ichokwadi, iwe unogona kuongorora zvakanaka kunyange mwedzi ye18 mushure mokupedzisa mararamiro ako.
Saka, vatambi vanobatana mumitambo isingabvumi kushandiswa kweSteroids havakurudzi kushandisa squipoise. Dare rinopesana nedoping rave rakaoma zvikuru mumakore achangopfuura uye kana iwe uri mutambi hauri kuisa pangozi basa rako kunze kwekuti wakagadzirira kurega kumakwikwi kwemakore anenge maviri mushure mokupedzisa mararamiro ako. Vatambi vechikadzi kana muvezi wezvemiti vanofarira kushandisa equipoise vanofanira kunamatira kumadekisi maduku kuitira kuti vasadzike kusimba varume sezwi rinokura, nekukura kwebvudzi pakati pevamwe. Chirwere chekurapa chikamu chakakosha zvikuru chekuziva kana iwe unogona kunyatsoshandisa iko equipoise usingasviki chero hupi zvayo yakashata. Iyo mishonga haina kukurudzirwa kuvanhu vane chirwere chisingaperi chisingarapiki sehutachiwana, chinetso chemoyo, uye chirwere cheshuga kuti titaure zvishomanana. Nguva dzose yeuka kuudza chiremba wako kana iwe uine zvinetso zvakakomba zvakadai sekurutsa, kubuda ropa kana kunyanya kumera kwemakumbo ako.